कसरी iPhone ठीक छैन फिक्स गर्ने? - कसरी
कसरी iPhone ठीक छैन फिक्स गर्ने?
के तपाईलाई आफ्नो आईफोन खोल्न समस्या भइरहेको छ? चिन्ता नलिनुहोस्! यहाँ तपाईं पावर र अन्य समान आईफोन मुद्दाहरूमा सम्बन्धित सबै समस्याहरूको समाधानहरू भेट्टाउनुहुनेछ। हामी तपाईलाई समग्र दृष्टिकोणको साथ सहयोग गर्न विभिन्न समस्याहरु, हाँगाहरु, को विस्तार गर्न कोशिस गर्छौं, यसैले हामी हेरौं।
फिक्स आईफोन अन छैन - iPhone सम्भावित तरिकाहरू
१. तपाईको फोन पुन: सुरू गर्नुहोस्
तपाईंको फोन पुनः सुरु गर्न प्रयास गरेर सुरु गरौं। यसको लागि तपाई पावर बटन थिच्न चाहानु सक्नुहुन्छ। जाँच गर्नुहोस् कि यदि यसको लागि जिम्मेवार छ भने। यदि तपाईंसँग पुरानो आईफोन छ भने तपाईं होम बटन वा पावर बटनलाई लामो प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ।यदि त्यसले काम गरेन भने फोनमा पावर विकल्प प्रम्प्ट गर्नको लागि लक र साइड बटन सँगै थिच्नुहोस्।
धेरै जसो समय, त्यहाँ केहि ह्या hanging्गिंग वा सफ्टवेयर समस्या भएको छ भने, यसले यसलाई हल गर्नेछ। यो कुनै पनि समयमा अचानक हुन सक्छ। केहि अनुप्रयोगहरू वा प्रक्रियाहरूले तपाईंको आईफोनको प्रदर्शनमा बाधा पुर्‍याइरहेको हुन सक्छ।जे होस्, यदि यसले काम गर्दैन भने, त्यसपछि अर्को विकल्पको लागि जाँच गर्नुहोस्।
२. यो डिस्चार्ज नभएको निश्चित गर्नुहोस्
यदि तपाईंले केही समयको लागि आफ्नो फोन प्रयोग गर्नुभएन भने, यस्तो ब्याट्री डिस्चार्ज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो रातारात हुन सक्दछ वा तपाईं आफैं आफ्ना साथीहरूसँग रमाईलो गरिरहनुभएको बेला। त्यसकारण, पहिलो चरण भनेको यसलाई केबलको साथ जडान गर्नु हो। तपाईको आईफोनको साथ आउने एउटा प्रयोग गर्नुहोस् र यदि तपाईले विकल्प प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने निश्चित गर्नुहोस् कि यो सहि काम गर्दैछ।
यदि तपाईंले अझै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, विभिन्न केबल प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग फरक केबल छैन भने, नयाँ पसलमा पसलमा जानुहोस् वा तपाईंको म्याकको केबल प्रयोग गर्नुहोस्। केबल फोनसंग उपयुक्त छ भनेर तपाईले निश्चित हुनुपर्दछ। चार्जिंग पोर्टमा उड्नुहोस् यदि तपाईंलाई लाइन लाई शक्ति दिन प्रयास गर्नु छ भने। यदि अझै पनी काम गरेन भने समस्या ब्याट्रीमा नहुन सक्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि फोनले काम गर्दछ वा गर्दैन।
I. आईट्यून्स मार्फत पुनर्स्थापना गर्नुहोस्
अर्को विकल्प आईट्यून्स प्रयोग र आफ्नो उपकरण पुनर्स्थापना हो। यसका लागि तपाईंले पीसी (वा म्याक) प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं पहिले जडित हुनुहुन्थ्यो। यदि तपाईंले आफ्नो आईफोन कहिल्यै डेस्कटपको साथ प्रयोग गर्नुभएन भने, त्यहाँ ब्याकअप हुन सक्दैन। एक प्रख्यात एप्पल ग्राहक को रूप मा, यो तपाईको कम्तिमा एक पटक प्रयोग गर्नुभएमा धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ धेरै जसो ब्याकअप हुन्छ।
जे होस्, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको पीसीमा भर्खरको आईट्यून्स संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् । तपाईंको आईफोनलाई केबलको साथ जडान गर्नुहोस् र पावर बटन थिचेर पीसी जडान सुरू गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यदि उपकरणले प्रतिक्रिया दिएन भने, तपाईं यो चरण रोक्न सक्नुहुन्छ र अर्कोमा जान सक्नुहुन्छ। जे होस्, यदि यसले प्रतिक्रिया देखाउँदछ भने, यी चरणहरूको साथ अनुसरण गर्नुहोस्:
ITunes को साथ आईफोन जडान पछि, पीसी मा अनुप्रयोग मा आफ्नो उपकरण छान्नुहोस्
रिस्टोर विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। पुनर्स्थापना प्रक्रिया राम्रोसँग तपाईंको फोन रिसेट गर्दछ, र तपाईं आफ्नो बचत डाटा गुमाउनु हुनेछ।
यद्यपि सफा गर्नु अघि यसले तपाईंको भर्खरको डाटा बचत गर्नेछ। त्यसोभए उपकरण बन्द हुने निर्णय गर्नु अघि तपाईंले केही पनि गुमाउनु हुने छैन।
पुनर्स्थापना पछि, उपकरणको मानक सेटअप प्रक्रियाको साथ अनुसरण गर्नुहोस् र iTunes बाट तपाईंको ब्याकअप पुनर्स्थापना गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको फोन जानको लागि राम्रो हुनेछ।
I. आईक्लाउड दृष्टिकोण प्रयास गर्नुहोस्
यदि माथिका-चरणहरू कुनै सकारात्मक परिणाम लिदैन भने, तपाईं iCloud विकल्प प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाँही सफ्टवेयर मुद्दा यति गहिरो हुन्छ कि तपाईंको बटनले प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन। तपाईलाई एप्पल भित्रबाट प्रक्रिया सुरू गर्न मार्ग चाहिन्छ। यसको लागि तपाईलाई आईक्लाउड सक्रिय भएको आवाश्यक हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो उपकरण सुरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सम्भवतः आईक्लाउड प्रयोग गर्नुहोला। यहाँ चरणहरू छन्:
कुनै पनि अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् र आधिकारिक आईक्लाउड साइट भ्रमण गर्नुहोस्
तपाईंको आईफोनमा सक्रिय आईडीको साथ लगईन गर्नुहोस्
तपाईं 'मेरो उपकरण फेला पार्नुहोस्' वा साउन्ड कमाण्ड प्रयोग गर्न को लागी तपाईको आईफोनले प्रतिक्रिया देखाउँदछ कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
यदि होईन भने रिकभरी मोडको साथ अघि बढ्नुहोस्।
अब रिकभरी मोड चयन गर्नुहोस् र डाटा मेटाउन छनौट गर्नुहोस्
यसले तपाईंको फोनलाई नयाँमा पुनर्स्थापना गर्दछ, र त्यसपछि तपाईं सेटअप प्रक्रियाको साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ।
यस विधिमा, तपाईं कुनै पनि बचत फाइल वा ब्याकअप हराउनुहुनेछ जुन आईक्लाउडमा थिएन। जे होस्, यो एक उत्कृष्ट तत्व हो कि होइन तपाईको फोन पुनः स्टार्ट हुन्छ वा हुँदैन भनेर जाँच गर्न। यदि यो अझै काम गर्दैन भने, तपाईंसँग शारीरिक समस्याको अधिक हुन सक्छ।
The. एप्पल स्टोर मा जानुहोस्
अन्तिम विकल्पका रूपमा तपाईले एप्पल स्टोरमा जानुपर्नेछ र फोन जाँच गर्नु पर्छ। कहिलेकाँही ब्याट्री मर्दछ, वा फोनको केही अंश दिन्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई समस्याको समाधान प्रदान गर्न सक्दछन्।
के कारण यी समस्याहरु हुन सक्छ?
सफ्टवेयर समस्या केहि अनुप्रयोग वा अद्यावधिकको कारण हुन सक्छ, जसले ढिलाइ वा खराबीको कारण गर्दछ। जे होस्, तपाईं यसलाई पुनःसेट वा पुनर्स्थापित विधिको साथ समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यसले काम गरेन भने, उपकरणले क्षतिको केही प्रकार प्राप्त गरेको हुन सक्दछ। ड्रपहरू र प्रभावहरू वा पानीको क्षतिबाट शारीरिक क्षति आईफोनहरू हानीका लागि प्रमुख कारणहरू हुन्। त्यहाँ उपकरणमा एक घटक विफलता हुन सक्छ। जे भए पनि, एप्पल स्टोर कार्यकारीले तपाईंलाई समस्याको साथ मद्दत गर्न र यसलाई तपाईंको लागि सुधार गर्न सक्षम हुनेछ।
यो समझदार छ यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ। फोन र तपाईंको डाटा हराउनु ठूलो बडब्याक हुन सक्छ। जहाँसम्म, तपाईं अझै पनि यसको केही सुरक्षा वा केही बचाउन सक्नुहुन्छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु अघि माथिका सबै दिइएका विधिहरू प्रयास गर्नुभयो। कहिलेकाँही, यो उत्तम छ तपाईंको उपकरण छोड्नुहोस्, र यो अन्ततः रिसेट हुन सक्छ। यद्यपि एक मृत फोनले तपाईंलाई नयाँ मोडलको साथ बदल्नको लागि प्रोम्प्ट गर्न सक्दछ। तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। यदि तपाईंसँग अघिल्लो उपकरणमा आईक्लाउड वा आईट्यून्स ब्याकअप छ भने, तपाईं नयाँ एप्पल आईफोनमा पूरा डाटा पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी आशावादी छौं कि गाईडले तपाईंलाई पावर मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्षम भयो। यो प्रयास र आईफोन खोल्न वा माथिको भन्दा फरक विधि प्रयोग गर्न सल्लाह दिइदैन। एप्पल स्टोर नजिकको मर्मत पसल भ्रमण गर्नु भन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ।
फिक्स आईफुट आईट्यून्समा जडान हुन सक्दैन
एयरपडहरु केस चार्ज भइरहेको छैन - फिक्स गर्नका लागि गाईड
कसरी एक खेलाडी 123movies हुन
तपाईं अनलाइन के हेर्नुहुन्छ?
xbox एक प्रत्यक्ष फ्री कोडहरू
डिज्नी प्लस 30-दिन नि: शुल्क परीक्षण
सामसु smart स्मार्ट टिभीमा प्लूटो टिभी कसरी हेर्ने
कम्प्युटरमा नि: शुल्क लुक्स कसरी पाउने